Astaamaha Lagu Garto Marka Qofaad Xiriir Leedihiin Uu Kugu Wato Faa'ido Shaqsiyeed - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»Astaamaha Lagu Garto Marka Qofaad Xiriir Leedihiin Uu Kugu Wato Faa’ido Shaqsiyeed
Astaamaha Lagu Garto Marka Qofaad Xiriir Leedihiin Uu Kugu Wato Faa’ido Shaqsiyeed
Waxaad u malaynaysaa inaad heshay ama xiriir aad la yeelatay qof wanaagsan oo aad si farxad leh u sheegan karto in isaga/iyada ay tahay qofka kugu fiican, ilaa kaliya aad ka ogaato inuu isagu/iyadu kuu adeegsanayo faa’iidooyinkiisa/keeda.
Waa kuwaan 3 calaamadood oo aad ku ogaan karto in isaga/iyadu ay si weyn kuugu daneysaneyso adiga oo aan ogayn:
1. Isaga/iyada dhaqaale ahaan adiga ayay si buuxda kuugu tiirsantahay
Waxaa laga yaabaa in adiga iyo qofka kale ee aad xiriirka leedihiin aad isku waafaqi kartaan ama iskula socon kartaan 1,000 siyaabood laakiin dhaqaale ahaan aysan suurtagal ahayn. Si kastaba ha ahaatee, ma aha wax xun.
Waxay dhibaato uun noqotaa marka isaga/iyadu aysan ku dadaalaynin inay hagaajiso xaaladdiisa maaliyadeed maadaama aad si fudud u xalliso dhammaan arrimaha maaliyadeed ee isaga/iyada.
Haddii lammaanahaagu kugu tiirsan yahay inaad u iibsiso isaga/iyada kaararka taleefanka uu ku shubanayo, oo aad siiso isaga/iyada lacag gaadiid, ka bixiso biilasha ama xitaa siiso lacagaha yar yar ee jeebka, waa calaamad cad inuu isagu/iyadu kaliya kuula joogo arrimo dhaqaale.
2. Isaga/iyada taageero ayuu mar walba ku weydiisanayaa
Haddii aad aragto inaad si joogto ah wax ugu qabanayso ninka ama gabadha xiriirka aad leedihiin oo isaga/iyada aadan taas badalkeeda ka helin ama wax ixsaan ah aadan ka helin markaad caawin uga baahato, fursadaha ayaa ah in lagugu daneysanayo.
Waxaad u baahan tahay qof ku dadaala inuu kaa farxiyo kana fal celiya jacaylka iyo taageerada aad u muujiso isaga/iyada.
Taageerada ayaa la rabaa inay ka timaaddo labada dhinac markay noqoto xirdhiidhka, laakiin haddii aad tahay qofka had iyo jeer taageerada bixiya oo tanaasul sameeya, markaa waa xidhiidh hal dhinac ah.
3. Waligaa laguma barin qoyskiisa/keeda iyo asxaabta
Waa inaadan marnaba la joogin qof xiriir idinka dhexeeyo balse kaa qarinaya dadka kale. Haddii aad muddo is shukaansanayseen oo isagu/iyadu aanay weligood ku barin qoyskiisa/qoyskeeda, asxaabteeda/asxaabtiisa waxay la macno tahay in isaga/iyada aysan si dhab ah kuu rabin oo ay waqtiga kaa lumineyso.
Ninka/naagta sida dhabta ah kuu jecel ayaa ku dadaali doona inay ku baraan dadka ugu muhiimsan noloshiisa/nolosheeda, kuwaas oo ah qoyskiisa iyo saaxiibbadiis.
Haddii isaga/iyada ay kaa qariyaan dadkooda, waxay si cad uga dhigan tahay inaadan mudnaan u lahayn noloshiisa/nolosheeda.
Cuntooyinka ugu fiican ee sare u qaada koritaanka timaha